जानी राखौँ : दही खानुका यति धेरै फाईदा !, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
जानी राखौँ : दही खानुका यति धेरै फाईदा !
काठमाडौँ । दही स्वादिलो गुणकारी पेय दही सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा अनेक लाभ मिल्छ। तर, दही खाने समय र तरिकामा भने ख्याल गर्नुपर्छ। किनभने दही गुणकारी हुँदाहुँदै पनि यसको सेवन गर्ने विधि र समय थाहा नहुँदा यो विषाक्त बन्न पुग्छ।
दहीको आर्युवेदिक महत्व छ। यो स्वाद र स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, सौन्दर्यका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी मानिन्छ । दहीमा केहि यस्ता तत्व हुन्छ, जसले पाचन क्रियालाई चुस्त राख्न सहयोग गर्छ ।